N'ogbe mini dị mkpa mmanụ diffuser | AromaEasy
Home / shop / Esi ísì ụtọ / Obere Diffuser
100% nke PP ihe ọhụrụ dị n’ahịa na-enweghị ihe na-egbu egbu iji mee ka ndụ gị sie ike. Yana arụmọrụ nchekwa akpaka na-egbochi iji kwụsị ike ọgwụgwụ na ijikwa nchekwa, nchekwa ike na udo nke uche.
ibu Họrọ otu nhọrọ1 Ibe (Black A) - $ 29.9924 PC (Black A) - $ 369.36 ($ 15.39 / PC)240 PC (Black A) - $ 3619.73 ($ 15.08 / PC)1 Piece (Black B) - $ 29.9924 Pcs (Black B)- $ 369.36($15.39 /Pcs)240 PC (Black B) - $ 3619.73 ($ 15.08 / PC)1 Ibe (Osisi) - $ 29.9924 PC (Osisi) - $ 369.36 ($ 15.39 / PC)240 PC (Osisi) - $ 3619.73 ($ 15.08 / PC)Ọtụtụ ndị ọzọ, biko kpọtụrụ anyị Clear
Obere Mkpa mmanụ dị Mkpa Mpempe A005
SKU: A005 Categories: All Products, Esi ísì ụtọ, Obere Diffuser
mini mkpa mmanụ diffuser
ihe: ABS + PP
nghazi oge: 1h, 3h, 6h
Size Product: D116 * 129mm Ibu ibu: 250g
Mbukota Size kwa otu: 120 * 120 * 140mm Mbukota ibu kwa nkeji: 352g
Ogo okike / nkeji: 500 * 375 * 310mm / 24pcs Arọ Carton: 9.2Kg
Atụmatụ ngwa ahia dị obere mini dị mkpa
【Ohere dị jụụ】 Nnukwu jụụ ma ị ga - enwe ezigbo ụra, ọrụ, ọmụmụ ihe. Ka ije nke ndụ na-abawanye, ndị mmadụ nwere ike ịna-enwe ike ọgwụgwụ, na-echegbu onwe ha, nweekwa ike ihi ụra, gbakwunye ọtụtụ mmanụ nke lavender mmanụ iji mee ka ahụ gị dajụọ ngwa ngwa.
Sh Emechila Nchekwa onwe ya na Nche】 Ozugbo mmiri gachaa, onye na-ahụ maka nchekwa ga-emechi onwe ya ka ọ ghara ikpochapu ma hụ na nchekwa, arụmọrụ ike na udo nke uche.
Jotọ Ndụ】 Ndụ ọhụrụ na nke a humidifier on, ọ nwere ike melite nkụ akpụkpọ na ndị ọzọ okwu dị ka nke ọma. Jiri ya iji mee ka ikuku na ikuku nke ụlọ gị ka mma, kpuchie ísì nke anụ ụlọ ma ọ bụ ị smokingụ sịga, ma chebe gị na ezinụlọ gị pụọ na akọrọ.
Ejiri nsonaazụ a nwapụtara egosipụtara na usoro ochie-mmanụ anyị na osisi ndị kacha mma, dịka French lavender, cumin Indonesian na Roman chamomile. Ngwakọta mmanụ anyị dị mkpa na-agwakọta mmanụ dị mkpa na oke ekwesịrị iji nwee mmetụta dị ike n'uche, ahụ na ahụike n'ozuzu ya. Mmanụ injin anyị enweghị nchekwa ọ bụla, ihe mgbakwunye ahụ bụ ihe efu. Naanị tinye 6 na 8 tụlee nke mmiri na-abanye na mmiri iji tinye ísìsì ọkụ n'ime ụlọ ọ bụla.
Osisi iri dị mkpa-mmanụ anyị dị mkpa dị mkpa dị iri isii gụnyere mmanụ lavender, mmanụ mmanụ, mmanụ osisi tii, mmanụ oroma, oroma, lemongrass, jasmine, mmanụ nutmeg, mmanụ kloovu na mmanụ ọta mmanụ. Mmanụ niile sitere na ọkwa ọgwụgwọ, juputara na ite amịrị dị 10m iji gbochie ikpughe anyanwụ
Enweghị ihe mgbakwunye, enweghị ihe nhicha ihe dị ọnụ ala ma ọ bụ ndị na-ese ihe dị ala efu na-eji mmanụ mmanụ anyị. Anyị ga-eji owuwe ihe ubi mpaghara dịka o kwere mee. N’agbanyeghi n’oge owuwe ihe ubi dị ogologo, ọ ka mma maka gburugburu ebe obibi ma wepụta mmanụ dị mkpa kachasị mma. Anyị na-eji usoro mmịpụta dị iche iche, dị ka uzuoku ikuku na ịpị oyi, dị ka osisi ndị a na-egbute si kọọ.
Kedu ihe dị na igbe - 1300ml ultrasonic na-esi ísì ụtọ, 10ml lavender mmanụ dị mkpa, 10ml eucalyptus mmanụ dị mkpa, 10ml tii osisi dị mkpa, mmanụ 10ml mmanụ dị mkpa, mmanụ mkpa mmanụ dị mkpa 10ml, mmanụ dị mkpa 10ml lemongrass, 10ml Jasmine mmanụ dị mkpa, 10ml nutmeg mmanụ dị mkpa , 10ml kloovu mkpa mmanụ, 10ml spearmint mkpa mmanụ, ike ụdọ na ntuziaka.